संसारको सबैभन्दा धनी मानिस पनि आमा बिना त गरीबनै हुन्छ ! – Khabar Silo
आमालाई सृष्टि भनिन्छ । जसले गर्भमा राखेर सन्तानको सुरक्षा गर्दै आफैलाई पीडाको पोखरीमा राखेर धर्तीमा ल्यायिन् । सन्तानको लागि आफ्नो आमाभन्दा ठूलो केही हुँदैन । आफ्ना जीवनका कयौं रहर,आवश्यकता र उद्धेश्यलाई मारेर पनि सन्तानको मुस्कानमा खुसी रहन्छिन् आमा । विभिन्न व्यक्तिले आमाको परिचय यसरी दिएका छन् ।
दम्पतीका राेचक ६ किस्साः तपाई कस्ताे ?
हरके दम्पतीमा केहि न केहि बिषेता हुन्छन् । कसैको दाम्पत्य सुखद हुन्छन्, कसैको नाटकिय । यस्ता अनेक प्रवृत्ति हुन्छन्, दम्पतीमा पनि । तपाई कुन कित्तामा पर्नुहुन्छ त रु मूल्यांकन गर्नुहोस् । १.अभिभावकत्व दम्पती यस किसिमको दम्पतीमा पती वा पत्नीमध्ये एक अभिभावक जस्तै व्यवहार गर्छन् । –पती चाहन्छन्, आफ्नी पत्नीले आमाले जस्तै मेरो हेरचाह गरोस् । […]